Pịa Pịa-Call abụrụla ihe dị mkpa na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Nke Ọma | Martech Zone
Wednesday, February 21, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Pịa na-enye ohere ndị ahịa iji ekwentị gị azụmahịa na otu Pịa si search engine results. Ndị ahịa na-ahụkarị ịkpọ azụmaahịa ma pịa-na-oku na-eme ka ọ dịrị ha mfe karịa mgbe ọ bụla ịme ha. Ntinye ego ntinye oku zuru ụwa ọnụ bụ $ 7.41 na 2016 na nke a na-atụ anya ịrị elu $ 13.7 site na 2020
N'ezie, 61% nke ndị ọrụ ekwentị na-ekwu Pịa-ịkpọ-oku kachasị baa uru na oge ịzụta. Gbaa mbọ hụ na azụmaahịa gị dị njikere. Ihe omuma a site na Ozi Na-ejide, Ohere Pịa-ịkpọ: Ihe mere eji akpọ oku ekwentị n’agha, na-akọwapụta otu ọkpụkpọ oku akpọ oku aghọwo ihe dị oke mkpa na mbọ ị na-agba ahịa ọchụchọ.
Ihe ọmụma ahụ na-egosikwa na ọ bụghị naanị akụkụ nke mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ, ọ bụkwa akụkụ nke ekwesịrị itinye n'ọrụ na weebụsaịtị ọ bụla ebe azụmahịa ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike iji ekwentị gị bịakwute gị.
Ọ bụghị naanị atụmatụ mkpanaka. Dị ka desktọọpụ jikọtara na ngwaọrụ mkpanaka gị ma ọ bụ nwee ngwa ịkpọ oku na ha, njikọ ndị a na-arụkwa ọrụ. Skype, dịka ọmụmaatụ, ga-ebupụta ma pịa ma ọ bụrụ na m pịa nọmba ekwentị ejikọtara na Mac.
Y’oburu n’ichaghi ya, edegoro m ya otu esi eme hyperlink nọmba ekwentị. Debe ya na elu na ndetu nke njikarịcha saịtị nke ịchọrọ ịme taa!
Tags: pịa ịkpọnọmba ịkpọ okunọmba ekwentị hyperlinkinfographicm2nkeMobile na Mbadamba ụrọoku ekwentịakara ekwentị